आर्थिक – Page6– Fewa Times
कृषि विकास बैंकले शेयरधनीलाई लाभाङ्श दिने
काठमाडौं – सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकले आफ्ना शेयरधनीलाई ३० प्रतिशत लाभाङ्श दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को मुनाफाबाट बैंकले छ प्रतिशत शेयर लाभाङ्श र २४ प्रतिशत नगद लाभाङ्श दिने भएको हो । वितरणयोग्य मुनाफाबाट उक्त लाभाङ्श वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बैंकले जनाएका छ । नेपाल राष्ट्र......
आज सुनको भाउ घट्यो कि बढ्यो ?
काठमाडौँ – बुधबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । बुधबार छापावाल सुन तोलामा ७० हजार ८०० मा कारोबार भएको छ भने तेजावी सुन तोलामा ७० हजार ५०० मा कारोबार भएको छ । यस्तै चाँदी तोलामा रु ८३० मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । मंगलबार पनि सुनचाँदी यही मूल्यमा कारोबार......
सागले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव
काठमाडौँ – १३ औं संस्करणको दक्षिण एसियाली खेलकुदले समग्र खेलकुदकर्मीसँगै नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाएको छ । नेपालसहित सात देश सहभागी रहेको र विभिन्न २७ खेलका लागि काठमाडौँ, पोखरा र जनकपुरमा हुँदा खेलकुदसँगै पर्यटन र समग्र आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हो । देश संघीयतामा......
काठमाडौँ – वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धन अभियान अघि सारेको छ । आगामी वर्षा यामदेखि विद्युत् मागभन्दा बढी भएर खेर जाने अवस्था रहेको भन्दै चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला केन्द्रले विद्युत् चुल्होको अभियान अघि सारेको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्र थप १ हजार ५ मेगावाट......
मंसिर २३, काठमाडौँ – आज पनि सुनको भाउ घटेको छ । आइतबार प्रतितोला ७१ हजार २ सयमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज तोला २ सयले घटेर ७१ हजारमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै प्रतितोला ७० हजार ९ सयमा रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुन पनि आज तोलामा २ सयले घटेर ७० हजार ७ सयमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदीको भाउ भने तोलामा ५......
काठमाडौँ – आइतबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । शुक्रबार तोलामा ७१ हजार ७०० मा कारोबार भएको छापावा सुनको मूल्य आइतबार ७१ हजार २०० मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यसैगरी तेजावी सुन ६९ अजार ९०० मा कारोबार भएको छ । यस्तै चाँदी रु १० घटेर ८४० मा कारोबार भएको छ । शुक्रबार चाँदीको......
सुनको मूल्य तोलाको ८ सयले बढ्यो
काठमाडौँ – बुधबार सुनको मूल्य तोलाको ८ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले बुधबारका लागि छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ७२ हजार २ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । आइतबार प्रतितोला ७१ हजार ६ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको सुन सोमबार र मंगलबार ७१ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोवार भएको......
सुनको मुल्य बढ्यो, कति पुग्यो तोलामा ?
काठमाडौँ – मंगलबार तोलामा ७१ हजार २०० मा कारोबार भएको छापावाल सुन बुधबार तोलामा २०० ले बढेर ७१ हजार ४०० मा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै तेजावी सुन तोलामा ७१ हजार १०० मा कारोबार भएको छ । यस्तै चाँदी पनि मंगलबारको तुलनामा रु ५ ले बढेर तोलामा रु ८५० मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ......
काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सोमबार विद्युत् माग २१ हजार २८४ मेगावाट पावर अर्थात ११६९ मेगावाट मात्र थियो । तर, प्राधिकरणकै प्रक्षेपणअनुसार विद्युत् माग २२२५ मेगावाट हुनुपर्ने हो । एकाध वर्षमा पुसको दोस्रो/तोस्रो साता विद्युत् माग वर्षभरिकै उच्च माग पुगे पनि आधिकांश वर्ष......
काठमाडौँ – क्लीन फिड लागू हुनेगरी कार्यान्वयनमा आएको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनका कारण नेपालको विज्ञापन बजार १० अर्बबाट २० अर्ब माथि पुग्ने भएको छ । सो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आएपछि विज्ञापन एजेन्सीहरु खुसी भएका छन् भने नेपालको विज्ञापन बजारमा नयाँ तरङ्ग छाएको छ । विगत धेरै वर्षदेखि......